नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका प्रशिक्षक अब्लुल्लाह अल्मुताइरीले पद त्यागको घोषणा गरेका छन् । आज नेपालले साफ च्याम्पियनसिपमा बंगलादेशसँग १–१ को बराबरी खेलेको थियो । यससँगै नेपालले फाइनलमा स्थान बनाएको छ । नेपालले साफ च्याम्पियनपसिपको फाइनलमा स्थान बनाएको यो पहिलोपटक हो । तर, प्रशिक्षक अल्मुताइरीले भने आफूले टिमलाई ऐतिहासिक सफलता दिलाएको भन्दै साफको फाइनलपछि आफू नेपाल नफर्किने बताए ।
‘‘अन्तिम तीन दिनमा मैले धेरै नराम्रो अनुभव गरेँ । ममाथि धेरै अरोप लाग्यो । हिजो हाम्रो ३ बजे ट्रेनिङ थियो । त्यसकारण सहायक प्रशिक्षक र अर्को एकजना खेलाडी प्री म्याच प्रेस कन्फ्रेन्समा आएका हुन् । एउटा मिडियाले त्यसैलाई समाचार बनायो र मजाक उडायो,’’ नेपालका प्रशिक्षक अल्मुताइरीले भने, ‘‘आफ्नो प्रशिक्षकलाई त सम्मान गर्नुपर्छ । हामी प्रशिक्षक हौँ । नोकर होइन । हामी परिवार हौँ । हामी मानव हौँ ।
हाम्रो बच्चाहरू छन् । मैले त्यो मिडियालाई सोधेँ । म्याच फिक्सिङको अरोप लगाएर खुसी भयौ ? गर्व महशुस भयो ? म नोकर होइन । प्रशिक्षक हुँ । फुटबल विकासका लागि नेपाल आएको हुँ । मैले नेपालमा भएको पत्रकार सम्मेलन भनेको थिए । म इतिहास रच्न चाहन्छु । त्यो आज पूरा भएको छ । अब हामी शनिबार फाइनल खेल्नेछौँ । यो मेरो अन्तिम खेल हुनेछ । त्यो खेलपछि म कहिल्यै नेपाल फर्किने छैन ।’’
नेपालसँगको खेलपछि भावविव्हल बंगलादेशी खेलाडी
नेपालसँग बराबरी खेलेपछि बंगलादेश साफ च्याम्पियनसीपबाट आउट भएको छ । नेपालले फाइनलमा स्थान सुरक्षित गर्दा बंगलादेशी टिम समूह चरणबाटै घर फर्कियो ।
खेलको उत्तराद्धसम्म बंगलादेश ३ प्वाइन्ट बटुलेर फाइनलमा स्थान बनाउने बाटोमा थियो । ९ मिनेटमै लिएको अग्रता जोगाउन बंगलादेशले पूरै रक्षात्मक भएर खेल्यो । झण्डै सफल पनि भएको थियो । तर, अन्तमा भाग्यले नेपाललाई साथ दियो ।
खेलको ८८ औं मिनेटमा नेपालले पेनाल्टी पाएपछि खेलको नतिजा मोडियो अञ्जन विष्टले मौका खेर फालेनन् । खेल बराबरीमा टुंगियो । अन्तिम समयमा गोल खानुपर्दा बंगलादेशी खेलाडी विक्षिप्त बनेका थिए । केही खेलाडी मैदानमै रोए ।
बंगलादेशी खेलाडी रोएको दृष्यले नेपाली दर्शकलाई सन् १९९९ को साग फुटबलको फाइनलको याद ताजा गराएको छ । घरेलु मैदानमा भएको उक्त फाइनलमा नेपाल बंगलादेशसँग १-० ले हारेको थियो । खेलमा पूर्णनियन्त्रण कायम गरे पनि गोल गर्न चुक्दा नेपाल उपाधिबाट वञ्चित भएको थियो । नेपाली खेलाडीहरू यसरी नै मैदानमा रोएका थिए ।
बंगलादेशसँगको उक्त हारको बदला नेपालले आज लिएको छ ।
इटालीमा फुटबल खेलिरहेका विकास नेपाल आइपुगे
मेसी भर्सेस रोनाल्डो : वर्ष २०२१ मा कसको बढी गोल ? यस्तो छ तथ्याङ्क
पेनाल्टी र मेसीबारे एमबाप्पेले दिए यस्तो प्रतिक्रिया
यो वर्षको बोलोन डी’ओर कसले जित्ला ? जेरार्ड पिकेले यसो भने
मोडलसँग सल्किए फरवार्ड इकार्डी, ‘कतै गएर यौन सम्बन्ध राखौं’ भनेको गोप्य म्यासेज श्रीमतीले फेला पारेपछि…
एएफसी यू–२३ एसियन कप छनोट : नेपालले कहिले कोसँग खेल्दैछ ?